Ireo saribakoliny anefa iry toy ny tsy mahalala izay ambonin’ny tany. Toa tsy mahafantatra akory hoe mandrora mitsilany. Dia hiandry fotsiny izay higadonany eto ? Izay tokoa angamba ilay hoe miandry fa gasy e ! Mampatsiahy tenina poeta ankafiziko izay mihitsy ry Jean izao ataonao izao marina. ilay hoe “izay tsy mihetsika mihitsoka e !”. Asa raha efa henonao. Hotetehin-dry zareo hafenina amin’ireo avy any Dilambato ireo daholo izao ny tsy fahazarizariana misy eto amintsika dia eto fotsiny isika himenomenona eto fa ry mpanatanteraka baiko iretsy ny ataony ihany no ataony. Tsy avelan-dry zareo atao daholo ny hany fitadiavana misy eto isan’andro amin’io fotoana io dia andrasantsika eto fotsiny izay higadonany. Tsy avelan-dry zareo hipoipoitra fa sao manala baraka, hono, dia iny koa fa manaiky ary miandry izay higadonany. Tsy avelan-dry zareo mampiseho ny tongo-bakivaky dia manaiky foana e ! Ahoana moa no ahafahan’ireo vahiny ireo mamantatra ny tena olantsika sy ny tokony hanapiana raha ny ratra efa hahafaty aza afenina ?